International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Media Advisory: ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People’s Forum Organizing Committee 2014 concludes 4th Regional Consultation Meeting
Media Advisory: ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People’s Forum Organizing Committee 2014 concludes 4th Regional Consultation Meeting
ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People's Forum Organizing Committee 2014 concludes 4th Regional Consultation Meeting
Organizing Committee of ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People's Forum (ACSC/APF) 2014, comprised of representatives from Myanmar and other ASEAN countries have been undergoing preparation process for the ACSC/APF 2014 and the 4th Regional Consultation Meeting has been held on 22-23 February 2014 in Rangoon at YMCA. Representatives of the Organizing Committee will be holdingapress briefing of the progress of preparation at the end of the meeting.
What: Update on progress of preparation of ACSC/APF 2014
Where: 4th Floor, Yangon YMCA, Thein Pyu Road, Yangon
When: 23rd February, 2014 (4pm –6pm)
For more information: please contact – Joseph: +95 (0)9250752804), Debbie Stothard: +95 (0)09425013421
နေ့စွဲ - ၂၂ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
အကြောင်းအရာ။ ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
အာဆီယံအရက်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများညီလာခံ/ အာဆီယံလူထုဖိုရမ် ၂၀၁၄ ဖြစ်မြောက်ရေးကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပူးပေါင်း၍ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လာရာ (၄) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (Regional Consultation Meeting) ကို ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂-၂၃ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီး အစည်းအဝေးအဆုံးတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု နောက်ဆုံး အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောက် တက်ရောက်ရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် - ၂၃ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၄
အချိန်- ညနေ ၄ နာရီမှ - ၆ နာရီထိ
နေရာ - လေးလွှာ၊ YMCA သိမ်ဖြူလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့
ဆက်သွယ်ရန် - ကိုဂျိုးဇက် ဖုန်း - ၀၉၂၅၀၇၅၂၈၀၄ (မြန်မာဘာသာ) ဒယ်ဘီစတောက်ထာ့ ဖုန်း - ၀၉၄၂၅၀၁၃၄၂၁ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) website – www.aseanpeople .org
Journalists and Freedom of Speech Under Threat in Burma